सीडीओ सा’ब नुवाकोटमा लकडाउन खुलेको हो ? - Bidur Khabar
सीडीओ सा’ब नुवाकोटमा लकडाउन खुलेको हो ?
विदुर खबर २०७७ वैशाख ३० गते १४:३७
नुवाकोट । लकडाउनका सुरुवाती दिनमा नुवाकोटमा गाडी सञ्चालनमा निकै कडाइ गरिए पनि हिजोआज खुकुलो देखिएको छ । डराएर घर बसेका नागरिक पनि सवारी साधन लिएर सडकमा निस्कन थालेका छन् ।
यसको उदाहरण नुवाकोटका सहरी तथा भित्री भागमा देख्न सकिन्छ । जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्र बट्टार,विदुर, ढुङ्गे, त्रिशुली र हावा घर लगायतका क्षेत्रमा साँझ र बिहानको समयमा लकडाउन बिर्साउने गरी सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् । मानिसहरूको आवातजावत पनि निर्बाध छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको मंगलबार ५० औं दिन भइसकेको छ । यस अवधिमा देशभरका एकसय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नुवाकोटका अझैसम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छैन ।
नुवाकोटका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका भित्री पसलहरू धमाधम खुल्न थालेका छन् । मानिसहरू झुण्ड–झुण्डमा किनमेलका जाने गरेका देखिन्छन् । सुरुमा धमाधम पक्राउ गरेर कारबाही चलाउने प्रहरी प्रशासन सडकमा त छन् । तर, उनीहरूले कुनै रोकावट गर्दैनन् । पहिला लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको भनेर दैनिकजसो यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिएर छाड्ने गरिएको भए पनि हिजोआज सो क्रम रोकिएको छ ।
बजार क्षेत्रका अधिकांश बैङ्क खुल्ला छन् । बैङ्कमा सर्वसाधारणको अत्यासलाग्दो भिड देख्न सकिन्छ । सरकार मातहतका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा पनि चाप बढी छ । बट्टारमा रहेको हिमालय र प्रभु बैङ्कमा सबैभन्दा भिड छ । तरकारी तथा खाद्यान्न बजारमा पनि भिड छ ।
कोरोना प्रभावित जिल्लाहरूबाट समेत नुवाकोटका बजार क्षेत्रमा मान्छे आउने क्रम बढेको पाइएको छ । कोरोना प्रभावित जिल्लाबाट पनि मान्छे आएको थाहा पाएपछि बजार क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बनेका छन् ।